အဲသယောပိန်ကြီးချုပ်အာမက် Abiy, ဘုရားကိုကို
အဲသယောပိန်ကြီးချုပ်အာမက် Abiy ငြိမ်းချမ်း)
Abiy Ahmedt လအနည်းငယ်ပြီးနောက်ဧပြီ 2018. ခုနှစ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူအိမ်နီးချင်းအီရီထရီးယားနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါနိုင်ငံများတွင်ရှည်လျားရန်သူများကိုပါပြီ။
နော်ဝေရဲ့အနိုဘယ်လ်ဖောင်ဒေးရှင်းကသူဟာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အဘို့လည်းမရှိနှင့်အိမ်နီးချင်းအီရီထရီးယားနှင့်အတူပဋိပက္ခဖြေရှင်း 2019. ပဲယခုအဲသယောပိန်ကြီးချုပ်အာမက် Abiy ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။
သူက ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိသွားတဲ့ "က၎င်း၏အရေးပါပဏာမအိမ်နီးချင်းအီရီထရီးယားနှင့်အတူနယ်စပ်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရန်များအတွက်အထူးသဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်ရန်သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှု" ပါ။
Ahmed ကခဲ့ - စျေးနှုန်းအဘို့အကြောင်းကိုခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်သူကြီးတွေအကြိုက်ဆုံးတွေထဲက - ဆှီဒငျရာသီဥတုလှုပ်ရှားသူ Greta Thunberg အတူ။ flaccid တဲ့အခါမှာငါ့အစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ get စျေးနှုန်းဝယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း - သို့မဟုတ်ပင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကရနိုငျတယျ။
အဲသယောပိန်ကြီးချုပ်အာမက် Abiy လုံးဝသူကွီးအီရီထရီးယားနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အနည်းဆုံး၎င်း၏အသစ်ကပိုပြီးငြိမ်းချမ်းသောလိုင်းနှင့်အတူအာဖရိကဦးချိုကိုမပြောင်းလဲခဲ့၏။
ကျိန် ဆို. ပူဇော်ခရစ်ယာန်
ထို့အပြင်ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦး Etiopens ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန် နှင့်အဲသယောပိအသိုင်းအဝိုင်းသည် Pentecostal အပြည့်အဝဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်သူများဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ ဒါက Pentecostal လှုပ်ရှားမှုနိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသောသူခရစ်ယာန်တစ်ဦးလူတစ်ဦးတစ်တန်းတွင်လည်းဒုတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကသင်းအုပ်ဆရာများနှင့်ဆရာဝန်က Denis Mugwege ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
2018: DRC နှင့်အီရတ်ကနေ yazidiska Nadia Murad ကနေဆရာဝန်က Denis Mukwege ။
2017: နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းဖို့နိုင်ငံတကာကမ်ပိန်း, Ican ။
2016: ကိုလံဘီယာသမ္မတ Juan Manuel Santos ။
2015: တူနီးရှားအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး Quartet ။
2014: ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများပါကစ္စတန်၏မာလာလာဘာဘရာဘော့နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ Kailash Satyarthi ။
2013: ဓာတုလက်နက်များတားမြစ်များအတွက်အဖွဲ့အစည်း, OPCW ။
2011 ခုနှစ်: လိုင်ဘေးရီးယားသမ္မတ Ellen Johnson Sirleaf, လိုင်ဘေးရီးယားငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူ Leymah Gbowee နဲ့ယီမင်သတင်းစာဆရာနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Tawakkol Karman ။
2010: တရုတ်အတိုက်အခံ Liu Xiaobo ။
source TT / Express ကို